Gọọmentị South Korea 'Na-emepe Nnukwu Nsogbu K-Startup
K-mmalite Nnukwu Ihe Grandma Aka 2021 (KSGC 2021) bụ mmemme mmepe ụwa zuru ụwa ọnụ nke gọọmentị Korea na National IT Industry Promotion Agency (NIPA) kwadoro ma kwụọ ụgwọ maka mbido ịmalite ịgbasa na South Korea
Ebe E Si Nweta: Getinthering.co
2021 abụrụla afọ ojuju maka usoro mmalite nke Korea n'agbanyeghị oke ọrịa Covid-19. Mbido Korea Chat API Sendbird welitere $ 100 nde na usoro C nke nwere uru nke ijeri $ 1.05.
Sendbird bụ otu n'ime azụmaahịa 12 nke mbụ na-apụ na South Korea. Companylọ ọrụ e-commerce kasị ukwuu na South Korea, Coupang, welitere ihe dị ka ijeri $ 4.6 na nnukwu onyinye mbụ ọha na United States (IPO) n'afọ a.
Na nkeji iri na ise nke 2021, opekata mpe ụlọ ọrụ 34 (ọtụtụ n'ime ha bụ mmalite teknụzụ), etinyela aka na Korea Exchange (KRX) maka IPO.
Ntọala nke Ex-Googler na 2017, Bear Robotics nke dị na California bụ onye na-emepụta rọbọt e mere iji buru nri n'ụlọ nri.
Robot nke ụlọ ọrụ ahụ na-eji AI iji nyere ndị ọrụ aka ibubata nri site na kichin gaa na tebụl na-arụ obere ọrụ mmadụ. Bear Robotics gbasaa na South Korea na Asia site na K-Startup Grand Challenge na 2017.
FreeD Group bụ ihe mmeri na-emeri njem na ụdị ndụ ụlọ ọrụ ntanetị dijitalụ AI. FreeD Group's TravelFlan nwere ihe karịrị 20 nde ihe data pụrụ iche kwa ụbọchị yana ikike ịmụ ihe igwe ya.
Ihu ya AI Concierge Chatbot na-eje ozi dị ka azụmahịa azụmahịa na usoro ntinye akwụkwọ njem nke na-enyekwa ndụmọdụ dị mma na ahụmịhe pụrụ iche nye ndị ọrụ.
Uzo AI na-ebi ndu AI na-ebi ndu site na Hong Kong bu ndi okenye nke 2016 nke usoro KSGC.
Teknụzụ mmalite nke teknụzụ Texas malitere Ommo gbasaa iru ya na ahịa Asia yana isonye na mmemme K-Startup Grand Challenge 2020.
Kemgbe ịbanye na mmemme KSGC n'oge ọkọchị nke 2020, teknụzụ Ommo welitere US $ 3M nke ndị na-achụ ego Korea na-eduzi.
Kyul Ko, Co-guzobere & COO, Teknụzụ Ommo kere, “KSGC nyeere aka meghee ụzọ ka anyị rute ndị nwere ike itinye ego na ndị mmekọ.
Ọbụghị naanị na gọọmentị Korea na-akwado mbido ụlọ, mana ọ na - enyere ndị mbido mba ụwa aka ịchọta ụlọ ha na Korea iji nweta nkwado ọ na - enye, KSGC bụ ihe atụ.
Ozugbo ị nwere ike ịme azụmahịa gị nke ọma na Korea, mgbe ahụ Asia niile nwere ike iru. ”
Rite uru nke usoro ihe omume ahụ
Ndị isi mmalite iri ahọpụtara ga-emerikwa onyinye nke ruru $ 320,000, yana ndị otu eburu ụzọ na-anata $ 120,000.
Nhazi maka nhọrọ
Iji tinye akwụkwọ, mbido ga-erughị afọ asaa, onye nnọchi anya ha ga-abụrịrị onye mba ọzọ
Ha gha egosiputa ezi ochicho nke igbasa n'ime ahia Korea na East Asia
KSGC 2021 ga-enye ndị otu 60 na ndị ọchụnta ego usoro ihe omume nke ọnwa 3.5 na South Korea nke gụnyere ịnweta ntuziaka ndị ọkachamara, oghere ngalaba na-arụkọ ọrụ, ụlọ ọrụ R & D ọgbara ọhụrụ, mmekọrịta ụlọ ọrụ, ịbanye na ahịa Asia, na ndị ọzọ.
Mmalite site na gburugburu ụwa nwere ike itinye akwụkwọ na K-Startup Grand Challenge 2021 Ebe a. Oge imechi maka ngwa bụ Tuesday, June 15, 2021.
Ihe omume a, nke ebido na 2016, ebumnuche iji kwalite mgbasawanye nke usoro iheomume na-emepe emepe na Asia ma nyere aka na mgbanwe nke South Korea na mmalite mmalite na azụmahịa na mpaghara ahụ.
N'ime afọ 2020, agbanyeghị ntiwapụ nke COVID-19, mmemme ahụ hụrụ 58% ịrị elu na ngwa, yana ndị otu 2,648 sitere na mba 118.
Energy Startup Pawame na-echedo 2.5M maka Mgbasa Ahịa, na-akwado maka $ 5M Series A